हरिहरपुरगढी सिन्धुली जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामध्ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित गाउँपालिका हो जुन महाभारत शृङ्खलादेखि चुरेसम्म फैलिएकोछ । यो गाउँपालिकाले काभ्रे, मकवानपुर, रौतहट र सर्लाही जिल्लाहरुलाई छोएको छ । साविकका हरिहरपुरगढी, पिपलमाढी, महेन्द्रझ्याडी र क्यानेश्वर गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर अहिले हरिहरपुरगढी गाउँपालिका बनाइएको छ । तीनसय त्रिचालिस दशमलव नौवर्गकि लोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको, आठ वडा रहेको यो गाउँपालिकाको जनसंख्या सत्ताइस् हजार सात सय सत्ताइस् रहेको छ । कोखाजोर खोला, मरिणखोला, क्यानखोला र बागमती नदीको प्रमुख जलाधार रहेको हरिहरपुरगढीहुँदै पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणाधीन छ । तामाङ, दनुवार , मगर, माझी, नेवार , पहरी, लगायत जाति को मुख्य बसोबास रहेको छ । यस गाउँगालिकाको वडा नम्बर १ मा तेह्रौ शताब्दीमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक हरिहरपुरगढी किल्ला छ । जसको नामबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको हो ।
वि.सं. ११५४ मा नान्यदेवले सिम्रौनगढमा हिन्दू राज्य (हालको वारा जिल्ला केन्द्र) स्थापना गरेका थिए । कला, संस्कृति र आर्थिक रुपले सम्पन्न सिम्रौनगढका अन्तिम राजा हरिसिंहदेव (कतै हरसिंहदेव पनि भनिएको छ) हुन् । यी राजा ठाकुर वंशका थिए । ठाकुर वंशको उत्पती दैवीय शक्तिबाट भएको विश्वास गरिन्छ । ठाकुरलाई अत्यन्त पवित्र र धार्मिक आस्थाका रूपमा लिने चलन तत्कालिन कर्णाट शासकहरूमा पाइन्छ ।
वि.सं. १३८१ मा सिम्रौ नगढमाथि दिल्लीका शासक गयासुद्धी न तुगलकले भिषण आक्रमण गरेर राज्य ध्वस्त बनाइदिए । राजा हरिसिंहदेव रानी देवलदेवी, बालक युवराज जगत्सिंह, मन्त्री चण्डेश्वर ठक्कुरसहित केही सेना लिएर बागमती किनार हुँदै चुरे पहाड उक्लिए । बियेको स्थानमानै सानो किल्ला बनाए । जुन किल्लालाई हरिहरपुरगढीका रुपमा चिनिन थालियो ।
सिम्रौनगढको किल्लाजस्तै जंगल, पानी र पर्खालको घेराभित्र हरिहरपुरगढी किल्ला निर्माण गरिएको छ । किल्ला निर्माणको एक वर्षपछि नै वि.सं. १३८२ तिर पश्चिमबिाट मुकु न्द सेनले आक्रमणगरी हरिहरपुरगढी कब्जा गरेपछि मरिणखोलाहुँदै पूर्वतिर भागेका हरिसिंहदेवको तीनपाटनमा पुगेर मृत्युभएको इतिहासमा उल्लेख छ ।
इस्वी सम्वत् २० अगस्त, १७६२ (वि.सं.१८१९) मा मकवानपुरगढी नजिकै गोरखाली सेनाले क्याम्प खडागरेपछि मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनले आफ्ना परिवारलाई हरिहरपुरगढीमा पठाएका थिए । २१ अगस्तमा गोरखालीले मकवानपुरगढीमा आक्रमण गरे । यो दृश्य किल्ला बाहिर बसेर राजा दिग्बन्धन सेनले हेरिरहेका थिए । युद्धमा हारखाएपछि दिग्बन्धन सेन हरिहरपुरगढीतिर लागे । मकवानपुरगढीमा तैनाथ गोर्खाली सेनाले ४ अक्टोबरमा हरिहरपुरगढीमा आक्रमण गरी कब्जामा लिए ।
हामी ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तब्य हरिहरपुरगढी किल्ला विभिन्न मार्ग प्रयोग गर्दै पुग्न सक्छौँ ।
काठमाडौँ- फापरचुली - हरिहरपुरगढी
काठमाडौब�ाट २ घण्टा गाडी छाडेर काभ्रे पुगिन्छ । काभ्रेको नमोबुद्धबाट पैदलयात्रा गर्दै फापरचुली, बस्तीपुर, चन्दनपुर, टुनीभञ्ज्याङ्ग भएर कालीखाेला हुँदै मधुवनी त्यहाँबाट खलङ्गा, भदाैरे, सेपाहा हुँदै हरिहरपुरगढी किल्ला पुगिन्छ ।
सिन्धुलीगढी - फापरचुली- हरिहरपुरगढी
सिन्धुलीगढीबाट पदयात्रा थालनी गर्दै चपाैली, नागी, मतानबास हुँदै बन्दिपुर, फापरचुली उक्लिएर बस्तीपुरहुँदै चन्दनपुर पुगिन्छ त्यहाँबाट टुनीभञ्ज्याङ्गहुँदै काेल्टार, तामाजाेर खाेलैखाेला कालीखाेला दाेभान पुगेर मधुवनी, खलङ्गा, भदाैरे, सेपाहा हुँदै हरिहरपुरगढी किल्ला पुगिन्छ ।
हेटौडा - घन्टे - हरिहरपुरगढी
मकवानपुर हेटौडाबाट २ घन्टाको गाडीको यात्रा पछि गुर्जी बसपार्क पुग्न सकिन्छ त्यहाँबाट २ घन्टाको पैदल यात्रा गरेर हरिहरपुरगढी किल्ला पुगिन्छ ।
हेमकर्णेश्वर अर्थात् घण्टे महादेव
मकवानपुरका अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेनका बुबा हेमकर्ण सेनलेवि.सं. १७५०देखि १८१६ सम्म राज्य गरे । हेमकर्ण सेनले हरिहरपुरगढीभन्दा केही तल बागमती नदी किनारको समथर फाँटमा वि.सं.१८०१ मा महादेव मन्दिरको स्थापना गराई विशाल घण्टसमेत चढाएको इतिहासमा पाइन्छ । सो महादेव मन्दिरलाई हेमकर्णेश्वर पनि भनिन्छ । ठू लो घण्टा रहेको मन्दिरका कारण घण्टे महादेव र सो स्थानलाई घण्टे भनिन थालिएको हो । १९९० सालको भूँइचालोले भत्किएको सो मन्दिर क्षेत्रमा २०१८ सालमा उत्खनन् गरिएको थियो । उत्खनन्मा शिवलिंग र शिलालेख भेटिएको थियो । सो शिलालेख अहिले पनि घण्टे मन्दिरमा रहेको छ ।
रानीपोखरी र धारा
हरिहरपुरगढीको उत्तरतर्फ ऐतिहासिक पोखरी रहेको छ । त्यस्तै गढीबाट एक किलोमिटरको दुरीमा बसेरी गाउँमा रानीपोखरी र रानीले नुहाएको धाराका रुपमा चर्चित ढुंगे धारा रहेको छ । हरिहरपुरगढी वरपर रहेका घोडाघाट, खोरभञ्ज्याङ, सिपाहीडाँँडा, गुर्जीडाँडा, नागदह, कोक्रो दह, झरना, भालुओढार (नागेगुफा), भैरवथान, भीमसेनथानलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थान छन् । कालीथान मन्दिर र चौतारा हरिहरपुरगढी नजिकै उत्तरतर्फ ऐतिहासिक महत्वको कालीथान छ । यो मन्दिरमा पाइएका सिंहलगायत आकृतिका मूर्तिहरु हेर्दा गढीको निर्माणसँगै यो मन्दिर पनि निर्माण भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कालीथान मन्दिर र चौतारा
हरिहरपुरगढी नजिकै उत्तर तर्फ ऐतिहासिक महत्वको कालीथान छ । यो मन्दिरमा पाइएका सिंहलगायत आकृतिका मूर्तिहरु हेर्दा गढीको निर्माणसँगै यो मन्दिर पनि निर्माण भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जीतपुर र भीमगाढ
हरिहरपुरगढीभन्दा अग्लो स्थानमा उत्तरतर्फ जीतपुर पर्छ । तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको यहाँ तामाङ भाषा, बौद्ध धर्म, संस्कृति, जनजीवन, स्थानीय खानपानबारेजान्न, बुझ्न र रमाइलो लिन सकिन्छ । सोलीघोप्टे डाँडाबाट कोखाजोर खोला र चिसापानीडाँडाबाट बागमती नदीको रमाइलो दृश्य देख्न सकिन्छ । जीतपुरबाट केही पर गुराँसको जंगल भएको अग्लो स्थान छ, भीमगाढ ।
गाउँघरमा बास, कोखाजोरमा बल्छी
माछाका लागि कोखाजोर र मरिण खोला प्रख्यात मानिन्छ । सोलीघोप्टे डाँडाबाट कोखाजोर खोलाका रमाइलो दृश्य निकाल्दै खोलामा बल्छी थापेर मज्जा लिन सकिन्छ । चिसापानीडाँडाबाट घामडुब्दै गर्दाको बागमती नदीको रमाइलो दृश्यपान गर्नसकिन्छ ।